Xildhibaanno Ka Soo Jeeda Bariga Somaliland Oo Masuuliyadda Afduubkii Ka Dhacay Yuube Ku Eedeeyay Komishanka Doorashada |
Xildhibaanno Ka Soo Jeeda Bariga Somaliland Oo Masuuliyadda Afduubkii Ka Dhacay Yuube Ku Eedeeyay Komishanka Doorashada
Hargeysa(GNN)-Qaar ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka Somaliland ee ka soo jeeda gobolada bari ee jamhuuriyadda Somaliland, ayaa sheegay in Komishanku masuul ka yahay in dadka deggaamada barigu gaystaan afduub. Waxay xildhibaannadu ku doodeen in dadkaasi xuquuqdoodii ka waayeen komishanka doorashada.
Xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud oo ka tirsan golaha wakiillada iyo xildhibaan Cabdiqaadir Indho-indho oo ka tirsan guurtida ayaa saxaafadda u sheegay inaanu Komishanku dadka fulinaya wacyigalinta codbixiyeyaasha ka qoran dadka aqoonta leh ee degaannada bariga, sidoo kalena gaadiidkooda aanu isticmaalin, taasina tahay mid dadka degaanku diidan yihiin.
“Doorkii hore eenu diwaangalinta gaynay degaanka, shaqaalihii iyo baabuurtii halkan(Hargeysa) ayaa laga kaxeeyay, markii aanu degaankii tagnay dadkii waxay nagu yidhaahdeen dee wixiina oo dhan xagaas ayaad kala timaadeenna, waxaanu ku nidhi fursadaha dambe ka faa’iidaysta imikana dadka ha celinina sidiina way nagula qaateen,” ayuu yidhi Xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud.
Waxa uu intaasi raaciyay “Waa in Komishanku shaqaalaha ka qaataan dadka degaanka ee wax garanaya, sidoo kalena baabuurta ka qaataan dadka degaanka, runtii qofka aan wax garanayn khasab maaha in la qaato laakiin, qofka wax garanaya ee degaankiisa joogaa xaq buu u leeyahay in la qaato. Dadka waxaanu ku boorinaynaa waxani idinkay dan idiin yihiin caalamkana meel walba aqoonsi ayaa la is waydiinayaa,” ayuu yidhi.
Xildhibaan Cabdiqaadir Indho-indho ayaa isna ku taliyay in dadka degaanka la siiyo shaqada wacyigalinta, lagana kiraysto gaadiidka lagu fulinayo wacyigalinta “Dad aan deegaanka u dhalan iyo gaadiid aan kuwii deegaanka ahayn oo cad bisil ah inaan dadka Afka lagaga Tolin ayaan soo jeedin lahaa. shaqada ay qabaan karaan dadka deegaanku in lasiiyo ayaan fari lahaa. gobolada bari waa meel aan maamulkeedu adkaan, waxaana loo baahan yahay in qorsheyaal lagu xukumo Warsangali iyo Dhulbahante in ay dad deegaankooda ah ku soo duulaan kuma dhacaan,laakiin dad cad bisil ah cidna waxba iskaga tirin mayso oo Sanaag ka yimid,” ayuu yidhi Mr Indho-indho.
Xildhibaan Indho-indho oo hadalkiisa sii wata waxa uu farriin u diray komishanka doorashada ”waxaan guddida Komiishanka ugu baaqayaa inaanay Sidii Dhahar iyo Badhan ay u maamuleen aanay u maamulin, qadariyaana sidii Taleex iyo Xudun ba loogu soo dhawaynayay markii ay indha-indhaynta ka wadeen degaankaasi,waxaana farayaa in ay wacyi galinta ka wadaa, baabuurta ka kiraystaan dadka deegaanka,qofna gurigiisa qof kale waxba kuma yeelayo,laakiin gaadhi aanay lahayn iyo makarafoonka ay ku war helaan waa nasiib daro,” ayuu yidhi Mr Indho-indho.